Tsipika marindrano ho an'ny doka Adidas marani-tsaina | Famoronana an-tserasera
Inona no azo tanterahina amin'ny ny fanakodia tsipika amin'ny logo fotsiny dia mahafinaritra indraindray. Izany no mitranga amin'ny hevitra lehibe notanterahina niaraka tamin'ity hevitra ity ho an'ny doka Adidas.
Izany no Dokambarotra kapa Adidas, Ilay nitondra ny saka tany anaty rano tamin'ny fananana io hevitra dokambarotra lehibe io, izay nisoratana tsipika marindrano mba hifanaraka tsara amin'ny sary famantarana ny marika kiraro fanatanjahan-tena.
Izany fomba famoronana izany omeo kofehy ny logo Adidas ary namboarina ho teboka ilazana ny marika amin'ny farany, dia miasa tsara hanatanterahana fanovana toa ilay vita, ary mahavariana.
Ireo tsipika telo miavaka ireo dia nanampy tsipika marindrano izay ahafahanao manintona tsara ny hevitry ny kapa Adidas. Mahafinaritra sy tsotra be izany ka faharanitan-tsaina madio. Mampianatra antsika koa izany fa io hevitra feno fahendrena io dia mety ho eo an-jorony miaraka amin'ny faharetana kely ary avelao izy "hahandro" ao an-tsaintsika sy ny famoronana.
Na mety ho fahadisoana tsotra amin'ny dantelina na amin'ny lalan-drà no mitarika omeo ireo hevitra tsara ireo. Iza no hiteny fa tsy nisy làlana nipoitra. Ary na dia nitehaka an'io tsipika marindrano io aza ny sasany, ny sasany kosa nilaza fa mety ho sambo lakana ihany koa izy io, na dia mbola betsaka aza ny mahatakatra fa avy amin'ny fialonana izany.
Un Logo Adidas izay nahatonga ny marika sneaker Mety hanana fisehoan-javatra tany am-boalohany tamin'ny fanaovana tsipika tsivalana fotsiny ambanin'ireo tsipika telo mivalona ireo. Niresaka an'io hevitra io izahay taona maro lasa izay amin'ireo dian-kapoka telo ary efa lasa lavitra io marika io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Mahagaga ity doka Adidas ity
Sarisoa placeholder Bayardo Rueda Mayorga dia hoy izy:
Tena tsara, tsotra dia tsara tarehy !!!
Valiny tamin'i Bayardo Rueda Mayorga
Rehefa miantso ny National Parks any Amerika amin'ny hevitra 1-kintana ianao
Rehefa maka risika ihany koa ireo marika lehibe amin'ny logo misy azy ireo: ny tranga BMW